By AxadleTM On Oct 30, 2019
Xiddiga reer Portugal iyo kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaa sheegay inay ahaan laheyd doqonimo haddii uu ku guul darreysan lahaa inuu wax ka barto ciyaartoy qiimo sarre leh sida Paul Scholes iyo Ryan Giggs inta uu ku gudi jiray waayihiisa ciyaareed ee naadiga Manchester United.
Cristiano Ronaldo ayaa xusid mudan in magaciisa uu ku qoray garoonka Old Trafford, kaddib markii uu Red Devils kaga soo biiray kooxda Sporting Lisbon sanadkii 2003-dii isagoo 18 jir ah, wuxuu dhaliyay 118 gool, lix xilli ciyaareed uu ku sugnaa Manchester United.
Kaddib shaqo aad u adag uu ka qabtay Cristiano Ronaldo kooxda Manchester United, kaddib wuxuu ku biiray naadiga Real Madrid, wuxuuna ku qaatay muddo dhan 9 sano, kahor inta uusan kaga dhaqaaqin magaalada Turin, weeraryahanka Juventus ayaa wuxuu dhawaan gaaray goolkiisii 700-aad xirfadiisa ciyaareed ee kubadda cagta, kuwaasoo isugu jira heer kooxood iyo xulkiisa qaranka Portugal.
Cristiano Ronaldo ayaa wareysi uu dhawaan ku bixiyay majaladda France Football ee dalka Faransiiska wuxuu ka jawaabay su’aal aheyd qaabka uu ku hormariyay kartidiisa, si uu ku gaaro heerka uu maanta ka gaaray kubadda cagta wuxuuna yiri:
“Markaad caqli yeelatid fiiri hareeraha isla markaana qaado casharka iyo fikradaha kuwa sameeya waxa adiga kaa sii wanaagsan”.
“Taasi waa waxa aan sameeyay markii aan joogay kooxda Manchester United oo ay ku sugnaayeen Ryan Giggs, Paul Scholes, Ruud van Nistelrooy iyo Rio Ferdinand, hadaadan wax ka baranin ragga noocaas ah, waxaad tahay doqon”.
“Halkan ma ahan in lagu daydo, laakiin inaad barato dhinacyada ciyaartoydan adduunka ugu fiican, dabeecaddaadana door bay ku yeelan doontaa fahamka arrintaas”.
Ronaldo ayaa tilmaamay doorka uu Sir Alex Ferguson ku leeyahay qaabka uu ku hormariyay awoodiisa ciyaareed wuxuuna yiri:
“Waxaan isaga ka bartay wax badan, waxaan lahaa xoogaa xirfad ah, waxaan arkay ciyaartoydan, waxaan garwaaqsaday inaan awood u leeyahay inaan goolal dhaliyo, waxaan bilaabay inaan ka fikiro inaan noqdo ciyaartoy buuxa, iyadoo aanu jirin daciifnimo”.